Wiil Soomaali ah ayaa Maxkamad Lagu Soo Taagay Maraykanka. – XOGMAAL.COM
Wiil Soomaali ah ayaa Maxkamad Lagu Soo Taagay Maraykanka.
Saraakiil ka mid ah Booliska ayaa laga soo xigtay in Maxmed uu ogolaaday in ay su’aalo ka weydiiyaan dilka gabadhaasi cadaanka ah, Waxaana la sheegay in ay is lahaadeen jawaabaha Maxamed iyo calaamada Gabadha la dilay.
Mohamed Abdullahi oo ah Somali ah oo ku nool Columbus ayaa lagu soo eedayay inuu ku lug lahaa dilka iyo gubista gabar cadaan ah oo 23 jir ah oo 14kii bishan la dilay.
Booliska xaafada upper adminton ee magaalada Columbus ayaa xabsiga dhigay Maxmed C/laahi oo 27 jir Soomaali ah, Kaasi oo tuhun uu ka galay in wiilka uu waxyaabhaa maanka dooriya cabsan yahay.
Waalidiinta wiilkan la xiray ayaan heyn macluumaad ku saabsan xariga wiilkooda, Balse hay’ad u dooda xuquuqda dadka muslimka iyo qareenka Maxamed ayaa laga filayaa in ay warbaahinta la wadaagaan sida uu xaalku yahay.